Mogadishu Journal » Saddex ruux oo lagu dilay Beledxaawo
Saddex ruux oo lagu dilay Beledxaawo
Mjournal :-Sadex ruux oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta la shaqeeya maamulka degmada Baledxaawo ee gobolka Gedo ayaa xalay Kooxo hubeysan waxaa ay ku dileen Magaaladaasi sidda ay xaqiijiyeen maamulka degmada.
Dadka la dilay ayaa kala ahaa Cabdi Cali Kaynaan oo qaabilsanaa waaxda maaliyadda degmada, Xuseen Shariif Cabdille oo ahaa Gudoomiye Waaxeed iyo Xabiibo Cabdiraxman Cali (Xaybo Ladan) oo ka mid aheyd Ururka Haweenka maamulka Jubbaland.
Ciidanka Ammaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta howlgallo ka wadda degmada Beledxaawo, waxaana Mas’uuliyiinta dilka dadkaasi sheegtay Al-Shabaab.
Qaar ka mid ah dadka kunool Magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo ayay wel wel badan ku abuurtay dhacdadaan.
Mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo Qarax lagula eegtay Duleedka Balcad
Weerar ka dhacay dalka sacuudiga